Fiiri fiidiyowyadeena cusub! - Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda Falls
Ansixinta Sharciga Ilaalinta Caafimaadka Taranka (RHPA) ayaa nagu kallifay inaan wax ka beddelno dhowr waxyaalood: hadda waxaan awood u leenahay inaan ku bixinno daryeelka ilmo soo rididda hal booqasho. Mar dambe ma haysanno muddo sugitaan oo khasab ah. Waxaan bilownay adeegsiga foomam cusub oo caafimaad. Iyo hada? Waxaan bedeleynaa fiidiyowyadeena!
Safarkayaga internetka / socodkeennu wuxuu muujiyey waxa bukaanku kala kulmi karo labada ballamo ee ay ku leeyihiin FCHC. Si kastaba ha noqotee, arrimihu way isbadaleen - oo hadda waxaan haynaa fiidiyow cusub oo beddelaya labadii hore aan u haysannay! Halkan ka eeg:
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church - Ku Soo Dalxi Xaruntayada!
Sidoo kale waan cusbooneysiinay saddex fiidiyowyo cusub oo daboolaya taariikhdeena, himiladeenna iyo yoolalka xarunteena laga soo xigtay Rosemary Codding, aasaasihii FCHC iyo agaasimihii.
Iyo takhasuskayaga Dr. Jan Fruiterman, oo ka mid ah dhakhaatiirta cudurada haweenka ee shahaadada ku leh xarunta daryeelka caafimaadka ee Falls Church, ayaa ku sharaxaya soo ridida himilada fiidiyaha hoose:
Fadlan fiiri oo wax ka baro Xarunteena!
#Ma jirto maalin
qoraal hore Waa maxay micnaha Sharciga Badbaadinta Caafimaadka Taranka ee adiga: July 1 iyo Beyond
boostada soo socota Fogaanta, Telehealth iyo Talaalka: Caawinta Bukaanadayada Xiliga COVID